Mitsubishi RVR ကား ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Blue Mitsubishi RVR 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Mitsubishi RVR 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Silver Mitsubishi RVR 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Silver Mitsubishi RVR 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေး...
Lks 372 ညှိနှိုင်း
Black Mitsubishi RVR 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Mitsubishi RVR 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl white Mitsubishi RVR 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...
Silver Mitsubishi RVR 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....
Silver Mitsubishi RVR 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Push Start,Smart Key,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
ယနေ့တွေမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လမ်းတွေထက်မှာ မစ်ဆူဘီရှီ အာဗီအာ ကားတွေကို ခေတ်မီတိုးတက်စွာ တွေ့လာနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံ ဒီဇိုင်းက ခေတ်ဆန်လှပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အာဗီအာတွေကို ၂၀၁၀ ကနေ စထုတ်လို့ပါပဲ။ မော်ဒယ် အမြင့်တွေ ဖြစ်ပေမဲ့လည်း တိုယိုတာ၊ ကလူဂါနဲ့ အခြား ဈေးသင့်တင့်တဲ့ ကားတွေကဲ့သို့ ဈေးနှုန်း ရှိတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလည်း ပိုကြည့်ကောင်းပြီး လူလည်း များများဆန့်တဲ့အတွက် လူကြိုက်များ၊ လူ ၀ယ်စီးများတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ အင်ဂျင်ကလည်း ၁.၈၊ ၂.၀ လီတာ လောက်သာ ရှိတဲ့ အတွက် လူကြိုက်များပါတယ်။
မစ်ဆူဘီရှီ မော်တာ ကုမ္ပဏီကတော့ ဂျပန် မာတီးနေရှင်း အော်တို မိုထစ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်း အုပ်စုထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ ၆ ခုမြောက် အကြီးမားဆုံးး ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်စီးကားတွေ အပြင် တစ်ခြား လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ကားနဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေလည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ၁၈၇၀ ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အခြား လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ တယ်လီကွန်နဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ဌင်း မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်း အုပ်စုကနေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
အာဗီအာကို မြောက်အမေရိကမှာ ၁၉၉၁ မော်ဒယ်တွင် စပြီး ဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ထုတ်မော်ဒယ်တွေကတော့ ၂၀၁၀ ကနေ စထွက်ထားတဲ့ တတိယမျိုးဆက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ အရင် ကားအမျိုးအစားကတော့ MPV လို့ခေါ်တဲ့ ပုံမှန်ကားမှာကိုမှ ဗန်ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖြစ်တဲ့ မီနီဗန်လို့ခေါ်တဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီဒန်တွေ၊ စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်တွေထက်ပိုပြီး ရှည်ပါတယ်။ ဌင်းကို MPV ( ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ခုရှိတဲ့ ကား) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပထမ မျိုး ဆက်နဲ့ ဒုတိယမှာ ယနေ့တွေ့နေရတဲ့ အာဗီအာပုံစံ မပေါက်သေးပါဘူး။ နောက်ပိုင်း တွေ့နေရတဲ့ အာဗီအာတွေမှာတော့ SUV ပုံစံကနေ မြင့်မားစွာ အမျိုးအစားကွဲ ခွဲထွက်လာတဲ့ ခေ၇ာစ်အိုဗာ ကား အမျိုးအစားမှာ ပါဝင်သွားပါတယ်။ ၂၀၁၀ နှစ်စလောက်မှာ ဂျပန်မှာ စပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဥရောပ နဲ့ မြေထဲပင်လယ် ၊ လက်တင်အမေရိက တို့တွေမှာတော့ တစ်ခြား နာမည် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မစ်ဆူဘီရှီ အေအစ်အိတ်ခ်ျ ဆိုပြီး ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ အမေရိကမှာတော့ မစ်ဆူဘီရှီ အောက်တလန်ဒါလို့ ခေါ်လျက် ရှိပါတယ်။ အာရှမှာ ရှိနေတဲ့ အာဗီအာကားတွေက ၁၈၀၀ စီစီကို ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော စင်ကာပူနဲ့ တရုတ်၊ အင်ဒိုတို့လိုနိင်ငံတွေကတော့ ၂၀၀၀ စီစီ နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပမှာတော့ ၁၆၀၀ စီစီ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်ကို သုံးပါတယ်။ ၁၈၀၀ စီစီ နဲ့ ၂၀၀၀ စီစီ ထဲမှာ ဒီဇယ်လည်း လာပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဓာတ်ဆီ အော်တိုကားတွေကို အသုံးပြုကြရာမှာ တွင်ကျယ်လျက်ရှိ ပါတယ်။
လေးဘီးမောင်း စနစ်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၀စီစီ အင်ဂျင်တွေမှာ မြင်းကောင်ရေ ၁၄၈စွမ်းရည်ကို တိုးမြင့်ထားပြီး အခြား ကီရာ ဆိုးလ်၊ ချာဗိုလတ် trax တို့နဲ့ယှဉ်လို့ရှိရင် ကောင်းကောင်းယှဉ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဗီအာရဲ့ စီဗီတီ အော်တို ဂီယာဘောက်စ်ကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဗီအာရဲ့ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုာ အခြားကားတွေနဲ့စာလျှင် အခြားကားတွေနဲ့စာလျှင် မဆိုးတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွင်းခန်းကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်ကာ ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ လူ (၅) ယောက်စီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အာဗီအာတွေဆို အပေါ်က အမိုးအပွင့်တွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်းရု့ တွေပါပါတယ်။ ၂၀၁၄ ကားတွေဆို ကားစီယာတိုင်တွင် ဘလူးတုမ့် တွေပါရှိပြီး ဖုန်းအ၀င်ခေါ်ဆိုမူတွေကို ကားမောင်းနေရင်း ပြောဆိုနိင်ပြီး အော်ဒီယိုနဲ့ ယူအစ်စ်ဘီ အပေါက်တွေပါ ပါရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဈေးတွေကတော့ တစ်ပတ်ရစ် လေလံကနေ မှာတာ ဖြစ်လို့ လေလံ အောင်ဈေးနဲ့ ကား ဂရိတ်တွေမှာ မူတည်ပြီး ကွာနိင်ပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၂၆၀ လောက်ကနေ ကျပ်သိန်း ၃၄၀ လောက်ထိ သွားပါတယ်။ သိန်း ၂၅၅ ဆိုလျှင် ၂၀၁၁ အာဗီအာ တစ်စီးကို ၀ယ်ယူနိင်ပါတယ်။ အရောင်တွေမူတည်ပြီးတော့ ဈေးက ကွာနိင်ပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ကျော်လောက်ဆို ၂၀၁၀ ခုနှစ် အမည်းရောင် အာဗီအာ တစ်စီးကို ရနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကား တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှုများ၊ အန်တီ လော့ခ် ဘရိတ်များ၊ လေအိတ်တွေလည်း ပါရှိပါတယ်။
ကွန်ပတ် အက်စ်ယူဗီတွေအဖြစ် ပုံသဏ္ဍာန်ထူးခြားစွာ တည်ရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး လေးဘီးမောင်းစနစ်တွေပါ ရရှိပါတယ်။ အပူပေးချိန်ညှိနိုင်တဲ့ ထိုင်ခုံများ၊ ဘလူးတုမ့်၊ အလွိုင်းဝှီး၊နှင်းခွဲမီး၊ အနောက်ထိုင်ခုံ လှန်ချနိုင်ခြင်း၊ လယ်သာပတ် စတီယာရင်၊တံခါး လေးပေါက်ကား၊ လျှပ်စစ် မှန်၊ စတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ်တွေကို တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ ၊ အသစ်တွေကိုလည်း ၀ယ်ယူကြတာတွေ့ ရှိပါတယ်။ မော်ဒယ်မြင့်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းကိုသာဝယ်ယူကြတာ ဖြစ်ပြီး ဘရန်နယူးတွေဆိုရင် လက်ရှိေ၇ာက်နေတဲ့ ခုနှစ်တွေနဲ့ သိပ်မကွာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်တွေ ဆိုပေမဲ့ တော်တော်ကို ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ လှပသေသပ်လှပြီး ခုနှစ်နဲ့ တွက်ရင်း ဂျပန်ကနေ လာတာ မကြာသေးတဲ့ကားတွေ ဖြစ်တာမို့ မိုင် လစ်ကလည်း မဆိုးလှပါဘူး။ အများအားဖြင့် ပြည်တွင်း ရောက်ပြီးသားတွေထဲမှာ အရောင်မျိုးစုံ ရှိတဲ့ အာဗီအာတွေကို ၀ယ်ယူနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးများတဲ့ အင်ဂျင်တွေကတော့ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ ၁၈၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီ လောက်ကို ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ပါဝါ လောခ့်၊ လုံခြုံမူအတွက် လေအိတ် များ၊ စတဲ့ အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်း ကားဂရိတ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။